आन्तरिक निर्वाचनले कसैमा कुनै तिक्तता र रिक्तता हुनुहुन्नः डा. महत - Dainik Online Dainik Online
आन्तरिक निर्वाचनले कसैमा कुनै तिक्तता र रिक्तता हुनुहुन्नः डा. महत
प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार २ : २०
काठमाडौंl नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले आन्तरिक निर्वाचनले कसैमा कुनै तिक्तता र रिक्तता हुन नहुने बताएका छन्।
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको क्रममा आज काठमाडौं क्षेत्र नं ५ को प्रदेश ‘क’ र ‘ख’ का प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। प्रदेश सभा ‘क’ को अधिवेशन विशाल मिलन केन्द्र र प्रदेश सभा ‘ख’ को अधिवेशन अनुप्रस्थ पार्टी प्यालेसमा भइरहेको छ।
सहमहामन्त्री महतले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा भरसक सहमतिमा नेतृत्व चयन भए अझ राम्रो हुने उल्लेख गर्दै भने, ‘यो पार्टीको अधिवेशन हो। नेतृत्वका लागि हामीबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। तर हामीले निर्वाचनमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा त अन्य राजनीतिक दलसँग गर्नुपर्दछ। तसर्थ निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण साथीहरूलगायत निर्वाचित हुने प्रदेश समितिले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन लगाउनुपर्दछ।’
उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई खेलको जसरी सहज रूपमा लिन आग्रह गरे। ‘निर्वाचनको परिणाम आएपछि पनि प्रतिस्पर्धी साथीहरूबीच रहेको सद्भाव र एकता पूर्ववत् रहनुपर्दछ । अझ सौहार्द र घनिष्ठ बन्नुपर्दछ। यो निर्वाचनको नतिजा आएपछि कुनै तिक्तता र रिक्तता नरहोस्,’ महतले भने।
नेपाली कांग्रेसको १४ महाधिवेशनको क्रममा आज देशभरका ४६ जिल्लामा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदैछ। महाधिवेशनको क्रममा ६ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ। त्यस्तै एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुको जिल्ला अधिवेशन १० मंसिर र प्रदेश अधिवेशन १६ र १७ मंसिरमा हुँदैछ।